AMISOM oo ka qayb qaadanaysa xaqiijinta amniga Muqdisho (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta AMISOM oo ka qayb qaadanaysa xaqiijinta amniga Muqdisho (SAWIRRO)
AMISOM oo ka qayb qaadanaysa xaqiijinta amniga Muqdisho (SAWIRRO)
Xoogaga Booliska AMISOM oo qayb ka ah Hawlgalka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ayaa Axaddii bilaabay inay la hawlgalaan Ciidanka Booliska ee Gobolka Banaadir.
Labada ciidan ayaa iska kaashanaya hawlgalada lagu xaqiijinayo ammaanka Magaalada Muqdisho, iyadoo tanina ay qayb ka tahay qorshayaasha lagu xoojinayo amniga magaalada ee bisha barakeysan ee Ramadan iyo doorashooyinka dalka ku soo fool leh.
“Ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo Qaybta Booliska ee Hawlgalka Midowga Afrika ee Somaliya (AMISOM) ayaa Axaddii bilaabay hawlgalo roondo ah oo lagu xoojinayo amniga Magaalada Muqdisho, iyadoo tani ay qayb ka tahay qorshayaal lagu xaqiijinayo amniga bisha Ramadan iyo doorashooyinka soo socda.” Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Xafiiska Warbaahinta ee AMISOM.
Warka ayaa lagu yiri “Sanadihii la soo dhaafay Ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo Booliska AMISOM waxay hawgalo wadajir ah ka wadeen Muqdisho iyo gobolada dalka. Ballanqaadkii Axadda ee cusbooneysiinta roondooyinka wuxuu ahaa xoojinta wadashaqeyntii soo jireenka ahayd.”
Taliye-yaasha Booliska ee labada dhinac oo toddobaadkii hore ku kulmay Magaalada Muqdisho ayaa isla qaatay inay si wadajira uga shaqeeyaan suggida amniga ee magaalada, ka hor inta aan la gaarin xilliga doorashada ee dalka.
Dib u bilaabidda hawlgalada wadajirka ee labada ciidan ayaa ku soo aadaysa, xilli muddooyinkii ugu dambeysay uu gaabis ku yimid hawlgaladii, ay sida wadajirka uga samayn jireen Caasimadda Muqdisho.
Previous articleRooble “Sharaf ayay ii tahay in aan qaabilay, waqtina la qaatay Aadan Maxamed Cali”
Next articleR/wasaare Rooble oo la kulmay Saraakiisha laamaha ammaanka